ठट्टा गर्दै फेसबुकमा ‘बाँच्नै आशै मरिसक्यो’ लेखेपछि… « Mechipost.com
ठट्टा गर्दै फेसबुकमा ‘बाँच्नै आशै मरिसक्यो’ लेखेपछि…
प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०७७, सोमबार १५:१५
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका विषयमा अहिले हल्का टिप्पणी गर्ने र समाजमा आतङ्क फैलनसक्ने विषय प्रचार गर्न क्रम बढेको छ ।
यसरी प्रचार गर्ने माध्यम बनाइएको छ– सामाजिक सञ्जाललाई । यसरी नै ठट्टा गर्दै मेची राजमार्गमा पर्ने बिप्ल्याँटे बजारमा कोभिड–१९ का सङ्क्रमित भेटिएको भन्दै अफवाह फैलाउने इलामका एक युवक पक्राउ परेका छन् ।
इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नं. ७ का सन्दीप योङहाङ लिम्बूले गत शुक्रवार बेलुकी आठ बजे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तीन जना साथीहरुलाई ट्याग गर्दै एउटा स्टाटस् लेखे । स्टाटसमा लेखिएको थियो – ‘इलामको विप्ल्याँटेमा एक जनामा कोरोना सङ्क्रमण । अव बाच्ने आशै मरिसक्यो …’ ।
इलामका कोभिड–१९ का सङ्क्रमित भेटिनु त के शीघ्र डाइग्नोष्टिक परीक्षण (आरडिटी) मा समेत कसैलाई पोजेटिभ भेटिएको छैन् । योङहाङको उक्त स्टाटसले जनमानसमा तरङ्ग नै ल्यायो । यसपछि उक्त विषय प्रहरीकहाँ पुग्यो । उनलाई शनिवार विहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामको टोलीले पक्राउ गरेको १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
योङहाङको फेसबुक स्टाटसले आम मानिसमा आतङ्क सिर्जना गरेको पाइएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
१ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयले महामारी सङ्क्रमणको त्रास फैलिइरहेको समयमा यस प्रकारका भ्रामक सन्देश सामाजिक सञ्जालमा नराख्न तथा सकारात्मक सन्देश दिने कृयाकलापमा सक्रिय हुन अपिल गरेको छ ।
तल्लो तहका सबै अधिवेशन स्थगित गर्ने कांग्रेसको निर्णय
फिदिम । नेपाली कांग्रेसका तल्ला तहका सबै अधिवेशनहरु स्थगित भएका छन् । आज बसेको पदाधिकारी
काठमाडौँ: लकडाउनको समयमा मलेसियामा मृत्यु भएकामध्ये २७ जना नेपाली कामदारको शव शनिबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुगेको